UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika eGhana uzakwenza iSikhumbuzo sokuphela kwaMandla obuKoloniyali
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziGqwesileyo zaseGhana » UMongameli weBhodi yezoKhenketho yase-Afrika eGhana uzakwenza iSikhumbuzo sokuphela kwaMandla obuKoloniyali
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba eziGqwesileyo zaseGhana • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Alain St.Ange, uMongameli weBhodi yezoKhenketho e-Afrika
U-Alain St.Ange, waseSeychelles owayesakuba nguMphathiswa wezoKhenketho, i-Aviation Civil, Ports & Marine, use-mission eGhana ukuphawula iminyaka eyi-100 yokufa kuka-Yaa Asantewaa, umfazi wokugqibela wase-Afrika ukukhokela imfazwe enkulu nxamnye namagunya obukoloniyali kwi-1900.
Abantu baseGhana bayakuhlala bebulela uNana Yaa Asantewaa, uMama weQhawe le-Asante.
Ubutshantliziyo bakhe kunye namaqhinga akhe omkhosi aba negalelo kwinkululeko yabantu nelizwe lakhe kwaye akhuthaze iimbono zobuzwe kwezinye iindawo zommandla waseNtshona Afrika.
IGhana iza kubhiyozela uMama weQhawe le-Asante ngeyona ndlela enkulu ngomhla we-7 kunye nowe-8 kaNovemba ka-2021.
St.Ange, uMongameli we IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB), uzakuba seGhana ejoyina uMongameli waseGhana uNana Addo; iNenekazi lokuqala uRebecca; Inenekazi lesibini uSamira; Bozoma St. John; Owongamileyo uKumkani waseAsante; Ilungu lePalamente yaseBritani uBellavia Ribeiro-Addy; Ilungu lePalamente yaseBritani uDiane Abbott; Ilungu lePalamente yaseBritani uDawn Butler; Ilungu lePalamente yaseBritani uAbena Oppong-Asare; kunye no-Angelique Kidjo, iMbasa yeGrammy ephumelele iMbasa yaseBenin imvumi, umdlali weqonga, kunye netshantliziyo; kunye nabaphathiswa baseGhana kunye namagosa karhulumente kwi- Ghana Umsitho ophawula i-100 leminyaka yelifa likaNana Yaa Asantewaa lokumbulela ngobugorha bakhe, ukomelela, kunye nesibindi.
“Abantu baseGhana bayakuhlala bebulela uNana Yaa Asantewaa, uMama weGorha le-Asante, othe ubutshantliziyo bakhe kunye namaqhinga akhe omkhosi anegalelo elikhulu kwinkululeko yabantu nakwilizwe lakhe. Iindima zakhe eGhana zikhuthaze iimbono zobuzwe kwezinye iindawo zommandla waseNtshona Afrika, nto leyo eyakhokelela ekubeni uninzi lwamazwe afumane inkululeko. IGhana iza kubhiyozela uMama weGorha le-Asante ngoMkhosi omkhulu ngomhla we-7 kunye nowe-8 kaNovemba ka-2021, ”utshilo iGhana.
“Ukuqinisekiswa kokuzimasa kwamaLungu ePalamente amane asuka e-United Kingdom, kongeza kuluhlu olude lwabantu abakwizinga eliphezulu abazakuzimasa umsitho waseGhana kulo nyaka. AmaLungu ePalamente amane amabhinqa angabaxhasi abanamandla bamalungelo abasetyhini kunye nesidingo sokuba bonke abafazi banyuke baye phezulu kwiinzame zabo ezikhethiweyo. Inkolelo yabo ekuxhotyisweni kwabasetyhini ihambelana nomxholo othi, 'UkuBhiyozela uPhawu lweNkalipha kunye nokuZimela,'” uDentaa Amoateng MBE ubonise.
“Siyazingca ngokubhiyozela neGhana kulo nyaka, njengoko iGhana iwonga uYaa Asantewaa obalaseleyo, ngomxholo okhethwe yiGhana. Inene, iminikelo yabasetyhini abamnyama ayinakuze ijongelwe phantsi, ukusuka ku-Yaa Asantewaa ukuya kweyethu iSekela likaMongameli wase-USA uKamala Harris, umfazi wokuqala kunye nomntu wokuqala omnyama ukubamba loo ofisi. Eli lixesha lokuphakamisa abafazi abaNtsundu,” utshilo uMongameli kunye ne-CEO ye-NAACP, uDerrick Johnson, kwileta eya kwi-GUBA.
I-NAACP idize ukuba ijoyina i-GUBA ekukhuliseni ulwazi malunga nokusweleka koomama kwaye yathembisa ukusebenzisana ne-GUBA ukuqinisekisa ukuba abafazi abaNtsundu baphila, bayachuma, kwaye bayaphumelela kuzo zonke iinkalo zobomi.
I-2021 iphawula kanye iminyaka eyi-100 yokusweleka kuka-Yaa Asantewaa, umfazi wokugqibela wase-Afrika ukukhokela imfazwe enkulu ngokuchasene namakoloniyali ngo-1900, apho wadlala indima yoMlawuli oyiNtloko woBukhosi obunamandla base-Asante.
Kwakhona kulindeleke eGhana kule mpelaveki ngu-Angelique Kidjo, iMbasa yeGrammy ephumelele iMbasa yaseBenine imvumi-ingoma, umdlali weqonga, kunye netshantliziyo elaziwa ngempembelelo yakhe yomculo eyahlukeneyo kunye neevidiyo zomculo zokuyila. Ngo-2007, iphephancwadi i<em>Time lambiza ngokuba “ngoyena mntu ubalaseleyo eAfrika. U-Angelique ucule ngexesha loMsitho wokuVulwa kweMidlalo yeOlimpiki ka-2020 yaseTokyo ngoJulayi 23, 2021. NgoSeptemba 15, 2021, imagazini iTime imbandakanye kuluhlu lwabo lwe-100 labona bantu banempembelelo kwihlabathi. Uzakube edlala kumsitho waseGhana wokubhiyozela iminyaka elikhulu kaNana Yaa.
U-Alain St.Ange kwicala lakhe, wamkelwa njengowayesakuba ngumthetho onyulwe ngokuthe ngqo njengeLungu (SPPF) leNdlu yoWiso-mthetho emele iLa Digue ngo-1979 kwaye njengeLungu (SNP) leNdlu yoWiso-mthetho emele i-Bel Air ngo-2002 ngaphambi koko. ukutyunjwa njengoMphathiswa ngo-2012 njengomnye weetekhnoloji ezimbini eziza kuqeshwa ngaphandle kweqela lezopolitiko. Phambi kokubizwa ngokuba nguMphathiswa, uAlain St.Ange wayenguMlawuli wezeNtengiso kunye ne-CEO kwiBhodi yezoKhenketho yaseSeychelles. '
“Yayingu-Alain St.Ange njengoMphathiswa waseSeychelles owaququzelela isimemo sikaKumkani oPhakamileyo wase-Asante ukuba abe luNdwendwe oluBekekileyo kwi-'Carnival of Carnivals' yesiqithi apho uluhlu olunomtsalane lwamazwe luthathe inxaxheba kumsitho okuphela kwawo. kwihlabathi leekhanivali. Olu tyelelo lubizwa ngokuba 'kukuBuyela eSeychelles' yiKumkani yase-Asante yayilelokuqala ukusukela oko uKumkani uPrempeh waseGhana wagxothwa eSeychelles, utshilo uCommunique.